20 nke Best iPhone na iPad Égwu na Games nke June 2016 - News Ọchịchị
20 nke Best iPhone na iPad Égwu na Games nke June 2016
New iOS ngwa ọdịnala nke June 2016 -agụnye Motion Stills, ikwommiri - 360 video Camera, Live.ly, Rodeo si pụta, Pixel Cup Soccer 16 na Human Resource Machine
Isiokwu a na-akpọ “20 nke kasị mma iPhone na iPad ngwa ọdịnala na egwuregwu a ọnwa” e dere site Stuart Dredge, n'ihi na theguardian.com on Friday 1st July 2016 06.00 UTC
Site mbịne gị photos n'ime gifs ka nọkwa buffalo maka a elu-igwe zoo, na site na-agbapụ virtual-eme eme videos na-amụta na-code, n'ọnwa a nwere a dịgasị iche iche nhọrọ nke ọhụrụ ngwa ọdịnala na egwuregwu n'ihi na iOS ngwaọrụ.
dị ka mgbe, ahịa ndị ziri ezi na oge e dere, na IAP egosi na ngwa na-eji na-eji ngwa ịzụrụ n'ụzọ ụfọdụ.
Ọ bụrụ na Android bụ gị n'elu ikpo okwu nke oke, e nwere ihe a iche iche kwa ọnwa roundup n'ihi na, nke a pụrụ ịchọta ebe a.
Unu jere na iji Live Photos mma na iOS? strangely, nke a ngwa si Google bụ ndị mbụ na-eme ka ọ bara uru, site n'ụzọ ọ na-enyo gị ole na ole na abụọ mkpachị n'ime gifs na ike ga-òkè na mmadụ netwọk na izi ozi ngwa ọdịnala. nkọ, mfe ma fun.
ikwommiri - 360 video Camera (Free)
Virtual eziokwu na-adịghị ga-abụ nnọọ ihe ọ na-enwe 360 ​​ogo Mpaghara: i nwere na-eme ka gị onwe gị na. Ikwommiri kwesịrị nnọọ agbalị ma ọ bụrụ na ị na-itching ga-esi kee ihe na VR, atụgharị gị panoramic videos n'ime 3D mkpachị na a pụrụ anya na Google kaadiboodu ekweisi. I nwekwara ike ịchọgharị na "splashes" nke ndị ọrụ ndị ọzọ si gburugburu ụwa.
Blue mbadamba nkume ndị e of London (Free)
Nke a ukara ngwa si English Heritage bụ a ndu na-acha anụnụ anụnụ mbadamba nkume ndị e gbasasịa gburugburu London na-akọwa ebe a ma ama n'akụkọ ihe mere eme ọgụgụ biri. The ngwa ga-enyere gị chọta ihe karịrị 900 mbadamba nkume ndị e, na-eme atụmatụ a ụzọ na-na ihe ndị kasị akpali tụrụ.
Egbugbere ọnụ-synching ngwa Musical.ly aghọwo ihe nke a craze on smartphones, ma nke a ọhụrụ spinoff bụ dị iche iche: a kpọmkwem ndorodoro n'ihi periscope, YouNow na ndị ọzọ na-ebi ndụ-gụgharia ọrụ. Ị nwere ike iji ngwa ka ohuru ndụ video mgbe akparị ụka na-ekiri. Ọ rocketed ihe App Store chaatị ka na-amalite ụbọchị.
Ọzọ ngwa iji nyere gị aka ịchọta ụzọ gburugburu a obodo, ọ bụ ezie na nke a, ị na-atụ anya ga-agba ọsọ adịghị agazi. RunGo bụ a collection of jogging ụzọ gasị na olu igodo iji jide n'aka na ị na-adịghị ga-efu, na ngwaọrụ soro gị ugboro na kalori-ere ọkụ.
E nwere ihe a ọtụtụ okwu banyere na-agba ume ka ụmụaka na-amụta ihe omume, na a ngosi ole na ole ngwa ọdịnala aiming inyere ha aka ime ya. Box Island bụ ọhụrụ: a usoro nke mmemme egwuregwu mgbagwoju anya dabeere gburugburu slotting iwu ọnụ na usoro ịchịkwa egwuregwu si boxy dike. Ọ bụ ịgụ na fun.
Ọzọ Google ngwa: a oge a keyboard nnọchi ngwa n'ihi na iOS. E nwere ihe a Google search button wuru na na, a eke 2016, gifs na Emoji na-ka ọ pụta ìhè dị ka nke ọma. The Swype-ịke "ife efe dee" bụ bụkwa uru, ọbụna ma ọ bụrụ na nke a abụghị naanị ebe ị ga-ahụ ndị dị otú ahụ a atụmatụ na n'oge.
Ọ bụ ka n'oge echiche maka echiche nke a "smart n'ụlọ" inwe ezi ọnụ na mainstream, ma e nwere ọtụtụ ngwaọrụ na teknụzụ si n'ebe pushing n'ụzọ ahụ. Gideon Ai bụ uru a anya ma ọ bụrụ na ị na n'ihu ìgwè mmadụ ahụ - ọ aims ka ọ dịkwuo mfe jikwaa gị ejikọrọ home.
aka Life: Ezumike (£ 2,49)
Ndị ọhụrụ ngwa site ụmụ Mmepụta Toca Boca, nke a bụ ihe fọrọ nke nta ka a virtual nwa bebi ulo: a collection of ezumike-themed Mpaghara, odide na ihe ndị na ụmụ nwere ike igwu na na uche, -eme nke ha akụkọ na ọbụna dekọọ ha dị ka videos. Na-emeghe-biri digital egwuregwu ụmụaka igbe, na-atọ ụtọ na ya.
Ihuenyo: Netflix UK Video Discovery (Free)
Ịnọgide na ihe bụ ọhụrụ on Netflix nwere ike ịbụ a siri ike, ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ịdabere naanị n'ihe ha video-gụgharia ọrụ onwe-atụ aro, nke a bụ a kemfe-atọ ndị ọzọ ngwa na-agbalị. "Bibie nke unyi, chọta ọdịnaya ị na-amasị,"Ọ na-ekwe nkwa,, adọ aka ná ntị gị mgbe egosi ihe na-achọ na-apụ n'anya nakwa dị ka ọ pụta ìhè ọhụrụ ọdịnaya.
Rodeo si pụta.
Rodeo si pụta – Sky Zoo Safari (Free + IAP)
Aka Crossy Rodeo, na visual n'ike mmụọ nsọ nke e si mobile hit Crossy Road, ọ bụ ezie na egwuregwu na ya onwe ya bụ ọ dịghị copycat. Ị ga-lasso na-agba ịnyịnya a nso nke ụmụ anụmanụ, hopping si azụ azụ na n'ịchịkwa ndị ọhụrụ maka gị "igwe zoo", nke ị nwere ike nweta nkwalite ka ị na-egwu.
Pixel Cup Soccer 16 (£ 2,29)
England nwere ike jiri nke Euro 2016, ma ọ bụrụ na football ahụhụ bụ ka ike na ị, Pixel Cup Soccer 16 bụ a magburu onwe oldschool Arcade egwuregwu na-agbalị. Anya si n'akụkụ on, ọ na-ahụ gị pinging na obi ụtọ site player ka player, na mfe njikwa na retro ndịna-enwe.
The mbụ CSR Racing bụ a na-ewu ewu na mbụ ịnya ụgbọ ala egwuregwu: obere, nkọ ikpuru agbụrụ kama ogologo n'apata-fests. The sequel anya bolder na mma, na nnọọ spiffing ndịna, nza nke ụgbọ ala customization, na ụfọdụ na-eche eche si ọtụtụ atụmatụ na-ị na-asọ mpi.
More mmemme nkà ebe a - "omume na-dị nnọọ mgbagwoju anya n'idozi" na-akọwa App Store ndepụta, -agba ume - na a egwuregwu na ahụ gị aka idozi usoro nke mgbagha egwuregwu mgbagwoju anya na gị nascent nzuzo nkà. N'adịghị ka Box Island, a na-iji na afọ niile na awade ụfọdụ ihe ịma aka egwuregwu mgbagwoju anya chepụta.
Lego Star Wars: The Force na-akpọte (Free + IAP)
Wepụtara n'akụkụ console version, nke a bụ ọhụrụ Lego nke ngalaba-abụọ egwuregwu, na ọhụrụ Star Wars nkiri isi ya. Ọ bụ a egbu maramara mix nke-alụ na ụlọ, na ọtụtụ Legofied odide si film na-egwu dị ka, na a "oge ngafe" na Aga hụ na ị na-niile ọhụrụ etoju ma na-agụ akụkọ dị ka ha na-tọhapụrụ na-abịa ọnwa.
N'akpa uwe Arcade Story (£ 3,99)
Mmepụta Kairosoft nwere a òtù nzuzo kụrụ ya Game Nrụpụta Story game, nke simulated a egwuregwu mmepe studio. E nweghị sequel (ma) ma na ụlọ ọrụ si ọhụrụ ntọhapụ bụ na a aka ahụ. Ị na-agba ọsọ na-ntụrụndụ Arcade, wụnye egwuregwu, edebe ahịa obi ụtọ na-ewere on ndorodoro arcades. Ọ bụ nnọọ na-eri ahụ.
Nke a bụ ihe ajọ emeso maka onye ọ bụla hụrụ ihe ma ọ bụ RPG egwuregwu. Ọ na-ahụ gị na-eke a party nke na-agụ akụkọ mgbe ahụ ezipụ ha ka agha, -achọpụta n'oge ochie onwunwe na larịị elu, ye kpukpru ido dị ngwá agha na ndị iro na-eme ihe dị ọhụrụ.
nkesa: Earth Wars (Free + IAP)
Nwere ike a ga-mma karịa (nwee ezigbo oké) Iwe nnụnụ na nkesa egwuregwu? Ọ na-emekwa a kwesịrị ntụkwasị obi na-ahụ na eluigwe na ala nke Autobots na Decepticons, dị ka ị na-ewu a ìgwè ndị robots-in-kwaara mgbe ahụ-akpọpụ ya ibu agha, mgbe iwuli elu gị onwe gị na ebe me wusiri.
Ị nwere ike ghara iti a classic scrolling oge ịse 'em elu, na Sky Force reloaded bụ otu n'ime ndị kasị mma mobile atụ nke genre. crisp, doro anya visuals na a pulsating soundtrack eso ndị na-atụ anya ekwu ọtụtụ mgbọ, na ike na-anakọta ọhụrụ ụgbọ elu na kwalite ha na-enye ihe atụmatụ.
Farm Heroes Saga Super (Free + IAP)
Eze ka na-aga ike na ya "Saga" egwuregwu, ọ bụ ezie na-agbakwunye "super" bụ ọhụrụ aga n'ihi na swiiti anwụrụ ụlọ ọrụ. Nke a ga-maara na onye ọ bụla keere mbụ Farm Heroes Saga egwuregwu: gbanwee yi ubi-eme ka ọkụ, na-eji boosters iji nyere aka mgbe ị na-rapaara.
Nke ahụ bụ anyị nhọrọ, ugbu a otú banyere gị? Ihe ngalaba bụ oghe maka echiche gị na ngwa ọdịnala n'elu, ma ọ bụ gị nwere ikwu maka ndị anyị na Agbaghara.
2013 Okpu na Gary maara ihe gbasara mmụọ Amụma
iPhone na iPad ọrụ achọpụta ihe iMessage ahụhụ na ...
20857	5 Apps, Nkeji edemede, Best iPhone na iPad ngwa ọdịnala, Emmanuel, iPhone, News, Stuart Dredge, Technology, UK Technology
← HP Spectre laptọọpụ Review [Na] Olee Otú M Ga-esi Chebe My Data ma ọ bụrụ na m na laptọọpụ Ezuru? →